Indlela yokubhala ngqindilili kuWhatsApp? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Indlela yokubhala ngqindilili kuWhatsApp?
Meyi 7, 2021 0 IiCententarios 278
Wonke umntu ngexesha elithile akabonwa edinga Sebenzisa iLizwi njengeprosesa yamagama ukubhala ileta, ukubhala umsebenzi okanye ukwenza naluphi na uhlobo lwesichaso. Ngokubanzi, ezona ndlela zisetyenziswa ngokuxhaphakileyo zi-italic, ukukrwela umgca ngaphantsi, kunye nesibindi.
Kubonakala ngathi kulula, kodwa yimisebenzi egqibeleleyo kunye nezixhobo ze gqamisa isicatshulwa okanye unike isiqabu kwigama okanye kwisivakalisi uyayidinga. Kwaye njengokuba inokusetyenziselwa le processor yamagama, inokuphunyezwa kumaqonga ahlukeneyo kunye nakwinethiwekhi yoluntu.
Phakathi kwazo kukho i-WhatsApp, nangona ezi ziindaba ezinexesha, kwabo bangazinto malunga nemisebenzi yayo ekhethekileyo, ukuya kuthi ga ngoku unokubeka amagama, izivakalisi, imihlathi yonke ibhalwe ngqindilili. Ngaba ungathanda ukufunda indlela? Silandele kwaye uzifumanele ngokwakho okanye ngokwakho.
Uyinika njani ifomathi yeBold kwimiyalezo ekwi-WhatsApp?
Kuqala kufuneka siphawule ukuba akukho luhlobo lunye lwefomathi onokukhetha, kuba kukho ezinye esiza kuthi sizikhankanye ekupheleni kwenqaku. Kodwa okwangoku, ukuze ube nakho nika ukubonakala kwesibindi kwimiyalezo yakho ye-WhatsApp, Kuya kufuneka usebenzise uphawu lwe-asterisk.
Ngoku, xa sele ukwazi oku, umbuzo omele uzibuze wona, zeziphi iindlela ii-asterisk ezisetyenziselwa ukwenza into enesibindi? Impendulo koku ilula kwaye siza kukucacisela yona kwimizekelo eliqela.
Ukuze ukwazi ukubeka igama elithile ngqindilili, kufuneka ubeke i-asterisk ekuqaleni nasekupheleni kwayo. Oko kukuthi: * Umbhalo *. Ngokwenza oku, igama linokuba nesibindi ngokuzenzekelayo ngaphandle kwemfuneko yokuthumela umyalezo.
Kwimeko apho ufuna ukunika inkangeleko yesibindi kwisivakalisi sonke, kuya kufuneka wenze okufanayo nakwimeko yangaphambili, ngeli xesha kuphela uza kubeka i-asterisk ekuqaleni kwegama lokuqala nasekupheleni kwegama lokugqibela yesivakalisi.
Ungayenza ngemihlathi ukuba unqwenela njalo. Kule meko kulula kakhulu kuba kuya kufuneka ubeke apho umhlathi uqala khona nalapho uphela khona ukwazi ukubeka i-asterisk.
Zeziphi ezinye iifomathi onokuzisebenzisa ngaphakathi kwincoko ye-WhatsApp?
Ukongeza kwisibindi, kukho ezinye iifomathi ezintathu onokuzisebenzisa ngendlela efanayo nale sele ichaziwe. Ezi fomathi zezi:
IndawoUkuze ukwazi ukusebenzisa le fomathi, kuya kufuneka uphumeze iikowuti zangasemva ngolu hlobo lulandelayo:
Ukrwelelwe umgca ngaphantsiUkufuna ukusebenzisa le fomathi kuthetha ukuba kuya kufuneka ukhethe ukhetho lweesimboli kwikhibhodi yakho yeselfowuni kwaye ujonge olu phawu lulandelayo: ~ text ~.
I-Cursive: Le yeyona fomathi ilula ukuyenza kuba kuya kufuneka ubeke i-underscore ekuqaleni nasekupheleni kwelizwi okanye isicatshulwa ofuna ukuba naso.
Kubalulekile ukuba ukhankanye ukuba ungazisebenzisa zonke ezi ndlela. Ekuphela kwemfuneko kukulandela indlela ozisebenzisa ngayo. Umzekelo: _ * Umbhalo * _. Ngale ndlela igama lakho liya kubhalwa ngomlomo kwaye libengqindilili.
1 Uyinika njani ifomathi yeBold kwimiyalezo ekwi-WhatsApp?
2 Zeziphi ezinye iifomathi onokuzisebenzisa ngaphakathi kwincoko ye-WhatsApp?
Uyithumela njani ividiyo ende kuWhatsApp?
Konke malunga ne-Facebook